China Yakakwira Kugona Sirasi Kuzadza Machine Line fekitori uye vanotengesa | Higee
Yakakwira Kugona Sirasi Kuzadza Machine Machine
Uyu muchina wekuzadza mishonga unoshandiswa sirasi yekuzadza bhodhoro uye capping, yakagadzirwa muSUS304 simbi isina simbi kana SUS316 anti-corrosion simbi isina tsvina yechikamu icho chakabatana nezvinhu, zvinoenderana neGMP standard.
Mitemo yekubhadhara: TT, L / C.
Otomatiki Yakakwira Kugona Simba Kudzadza Kutapa 2 mu1 Mashini
Iyi nhevedzano yemvura yekuzadza muchina inosanganisa kuzadza bhodhoro uye kuisa mune imwe monoblock, uye maitirwo maviri anoitwa azere otomatiki. Iyo inoshandiswa mukuzadza kwemvura kana kunama.
Muchina unogona kuvezwa kuti upedziswe neyakajairwa tafura yekuzadza, kuzadza, capper, bhodhoro muunganidzi.
● Iine Piston yekuzadza dzidziso, yekumhanyisa kumhanyisa inokurumidza uye kunyatso kukwirira; Chikamu chekuzadza chinogadziriswa.
Pashure: Huchi Kuzadza Machine Machine
Zvadaro: Otomatiki Shampoo Kuzadza Machine Line